Krataa a Efi Akwankyerɛ Kuw no Hɔ | Onyankopɔn Dɔ
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Altai American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Assamese Australian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cakchiquel (Central) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chokwe Chol Chuabo Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Douala Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Finnish Sign Language Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Iloko Indonesian Japanese Japanese Sign Language Jula Kabiye Kachin Kannada Kazakh Kekchi Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Mazatec (Huautla) Mbunda Mexican Sign Language Mixe (North Central) Mizo Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Ndau Ndebele Ndonga Ngabere Ngangela Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Rarotongan Romanian Rotuman Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swati Swedish Tahitian Tajiki Tamil Tarascan Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vezo Wallisian Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Onua a Wodɔ Yehowa:
Yesu kae sɛ: “Mubehu nokware no, na nokware no bɛma moade mo ho.” (Yohane 8:32) Hwɛ sɛnea asɛm yi hyɛ nkuran! “Nna a edi akyiri” a emu yɛ den na nkontompo ne atorodi abu so yi mu mpo no, yebetumi ahu nokware no ampa. (2 Timoteo 3:1) Wokae bere a wɔkyerɛkyerɛɛ Onyankopɔn Asɛm mu kyerɛɛ wo foforo ma wubehuu nokware no? Hwɛ sɛnea w’ani gyei!
Nanso sɛnea ehia sɛ yenya nokware no ho nimdeɛ na yɛka ho asɛm kyerɛ afoforo daa no, saa ara nso na ehia sɛ yɛbɔ yɛn bra ma ɛne nokware no hyia. Sɛ yɛbɛyɛ saa a, ehia sɛ yɛde yɛn ho sie Onyankopɔn dɔ mu. Dɛn na ehia sɛ yɛyɛ wɔ ho? Anadwo a Yesu rebewu no, ɔkaa biribi a ɛma yenya asɛm yi ho mmuae. Ɔka kyerɛɛ n’asomafo anokwafo no sɛ: “Sɛ mudi m’ahyɛde so a, mobɛtena me dɔ mu sɛnea madi Agya no ahyɛde so na mete ne dɔ mu no.”—Yohane 15:10.
Hyɛ no nsow sɛ, nea ɛmaa Yesu tenaa Onyankopɔn dɔ mu ne sɛ odii n’Agya ahyɛde so. Saa na ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛyɛ nnɛ. Sɛ yɛbɛtena Onyankopɔn dɔ mu a, ehia sɛ yɛde nokware no bɔ yɛn bra da biara. Saa anadwo no ara, Yesu kae sɛ: “Sɛ munim eyinom na moyɛ a, mo ani begye.”—Yohane 13:17.
Nea yɛrehwɛ kwan ara ne sɛ nhoma yi bɛboa wo ma wode nokware no abɔ wo bra daa na ama wode wo ho asie ‘Onyankopɔn dɔ mu, bere a woretwɛn daa nkwa no.’—Yuda 21.
Yehowa Adansefo Akwankyerɛ Kuw